बालुवाटार बैठकका एक घन्टा रामकुमारी झाँक्रीले किन मास्क खोलिनन्? - Sutra News
प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध तिनकुनेमा प्रदर्शन
पार्टी एकताको सकारात्क पहल भएको छैन, भ्रममा नपरौंः झाँक्री
काठमाडौं। प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनापछिको बैठक बस्नुअघि भएको एउटा अन्तरवार्ताका क्रममा एमाले सांसद रामकुमारी झाँक्रीले भनेकी थिइन्– आफैंले भंग गरेको संसदमा आउँदा श्री ३ केपी शर्मा ओलीले मास्क लगाएर आउनू, अनुहार नदेखिनेगरी सम्बोधन गर्नू!
ओली पक्षका अर्का नेतामाथि हावी भएकी उनले बारम्बार ओलीको राजनीतिक मात्र होइन, चारित्रक आलोचना पनि गरिन्। एक हिसाबले प्रधानमन्त्री ओली राजनीतिक रुपमा कमजोर भइसकेको प्रतीत गराएकी थिइन्।
फागुन २३ गतेका लागि सरकारले संसद बैठक बोलाएको थियो तर त्यसै दिन सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ऋषिराम कट्टेललाई जिम्मा लगाउँदै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि ओली हावी भए।
एमालेमा बहुमतमा रहेका उनले फटाफट निर्णय गर्न सक्ने आधार बन्यो। यसैले पनि ओलीले भनेका थिए,‘प्रचण्ड माधव नेपालहरूले मेरो राजनीतिक जीवन सिध्याउन लागेका थिए, अदालतले जोगाइदियो।’
एमालेभित्र पनि समानान्तर गतिविधि भइरहेपछि प्रधानमन्त्री ओली आक्रामक हुन थाले। २८ फागुनमा उनले बैठक राखी माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय कमिटीमा ल्याए भने, संसदीय दलको बैठक पनि निरन्तर राखेर फटाफट निर्णय लिए।
यसले माधवकुमार नेपाल समूहमा रहेका धेरैको राजनीतिक जीवनलाई असर गरिरहेको थियो। त्यसबीचमा झाँक्रीका लागि त निक्कै चुनौतिपूर्ण समय सुरु भएको थियो। उक्त समूहमा सबैभन्दा आक्रामकचाहिँ झाँक्री भएकी थिइन्।
बालुवाटारमा कहिल्यै नटेक्ने भनेकी उनी शुक्रबार भने लुरुलुरु मास्क लगाएरै त्यहाँ पुगिन्। र, चुपचाप एउटा कुनामा बसेर प्रधानमन्त्री ओलीका भनाई सुन्न बाध्य भइन्।
‘उनीहरू निरिहजस्तो देखिएका थिए। त्यसमा पनि झाँक्री त निक्कै नै निरिह। अनुहारको मलिन्द्रता देखिएला भनेर पनि उनले मास्क नखोलेकी होलिन्’, एक सांसद भन्छन्,‘प्रधानमन्त्रीतिर त आँखा जुधाएर पनि हेर्न सकिनन्।’
झाँक्रीका लागि राजनीतिक नभई नैतिक रुपमा यो भन्दा जटिल समय सायद यसअघि कहिल्यै पनि आएको थिएन। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि भएका विभिन्न ठाउँका विरोध सभामा उनी कहिँ आक्रामक वक्ता त कतै प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रधानमन्त्री ओली र राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि खनिएकी थिइन्।
ओलीलाई बालुवाटारबाट भक्तपुरको बालकोट पुराउने मात्र होइन, राष्ट्रपति भण्डारीले पनि त्यतै डेरा खोजे हुन्छ भनेकी थिइन्।
उनका तमाम गतिविधि र समाचारप्रति ध्यान राखेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिराटनगरको सभामा सम्बोधनका क्रममा झाँक्रीको थर मात्र लिएर प्रचण्डको आलोचना गरेका थिए।
यो आलोचनाको क्रममा झाँक्री पनि निरन्तर सक्रिय भइन्।
प्रदर्शनीमार्गमा भएको विरोध सभामा सम्बोधन गर्न उत्रिँदा झाँक्रीले मुखमा टेप लगाएकी थिइन् र ज्याकेटमा बोल्न पाइन्छ भन्ने लेखाएकी थिइन्। उनले सम्बोधनको सुरुआत नै बोल्न पाइन्छ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको चर्को आलोचना गरेकी थिइन्। सोही क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि खुलेर बिरोध गरेकी थिइन्। तर बालुवाटार बैठकमा भने उनी चुइँक्क पनि गरिनन्, मास्क पनि खस्काइनन्।
ओली निकट नेता भन्छन्,‘प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक हुर्मत लिएकी थिइन्। अहिले आफ्नै राजनीतिक हुर्मत हुने भएपछि किन बोल्थिन्? बरु अब कसरी समानुपातिक सांसदको जागिर टिकाउने भन्ने विषयमा सोचिरहेकी होलिन्।’
त्यसो त कतिपयले झाँक्रीलाई एमालेमा स्पष्टिकरण सोधिने आँकलन पनि गरेका थिए। यहि विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीसँग बैठकका क्रममा कतिपयले प्रश्न गरेका थिए। तर, ओलीले भनिदिए– उनी वेट भएकी नेत्री नै हैन, किन सोध्नु? सम्भवतः पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीले नै उनको राजनीतिक हैसियतका विषयमा टिप्पणी गरेपछि उनी मौन बस्नुको विकल्प नै रहेन।
ओली पक्षका कतिपय नेताले त यस्ता सांसदलाई कारबाही गर्नुपर्ने आवाज अहिले पनि जारी राखेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकारले संसदीय दलको बैठकपछि झाँक्रीलगायतले त्यसबेला ओलीको आलोचना गर्दा भनेका शव्द बुँदागत रुपमा उल्लेख गर्दै कारबाही किन नगर्ने? भनेर सोधेका छन्।
उनले भनेका छन्,‘यीनिहरूले के–केसम्म भनेका थिएनन्। अब एमालेभित्र अनुचित कुरा गर्नेलाई ६ महिनासम्म निलम्बन गर्नुपर्छ।’
झाँक्रीका सन्दर्भमा भने एमालेवृत्तमा भएको अर्को चर्चा पनि छ। प्रधानमन्त्री ओलीले समानुपातिक सांसदलाई कारबाही गर्ने अधिकार आफ्नो हातमा पारेपछि झाँक्रीलाई नै पहिलो कारबाही गर्छन् भन्ने अनुमान लगाइएको छ। तर अहिले नै त्यस्तो संकेत मिलेको छैन।
यो भिडियोपनि हेर्नुस -
प्रकाशित :चैत्र १४, २०७७ शनिवार - ११:२३:१८
# संसदीय दलको बैठक बालुवाटार